श्रावन २०७६ २	बिहिबार, 18 Jul 2019 द्वितीया, कृष्ण पक्ष
सुर्योदय: बिहान ०५:१४, सुर्यास्त: बेलुका ०६:५७ चन्द्रास्त: बिहान ०६:१४, चन्द्रोदय: रात्रि ०८:०९
मण्डेला दिवस आज - श्रावन २
जयापार्वती व्रत समाप्त पर्सि - श्रावन ४
संकष्टी चतुर्थी पर्सि - श्रावन ४
मधुश्रावाणी पर्व प्रारम्भ ४ दिन पछि - श्रावन ६
अष्टमी व्रत ६ दिन पछि - श्रावन ८
कामिका एकादशी १० दिन पछि - श्रावन १२
द्विपुष्कर १० दिन पछि - श्रावन १२
ह्यापाटाइटिस दिवस १० दिन पछि - श्रावन १२
सोम प्रदोष व्रत ११ दिन पछि - श्रावन १३
घण्टाकर्ण १२ दिन पछि - श्रावन १४
गठेमंगल १२ दिन पछि - श्रावन १४
गथाँमुग च:ह्रे पूजा १२ दिन पछि - श्रावन १४
दर्श औंसी १३ दिन पछि - श्रावन १५
निशि बार्ने १३ दिन पछि - श्रावन १५
खिर खाने दिन १३ दिन पछि - श्रावन १५
श्रावण औंसी १४ दिन पछि - श्रावन १६
स्नानदान गर्ने औंसी १४ दिन पछि - श्रावन १६
हलो बार्ने १४ दिन पछि - श्रावन १६
चन्द्र दर्शन १५ दिन पछि - श्रावन १७
गुँला पर्व आरम्भ १५ दिन पछि - श्रावन १७
मेष ( च, चू, चे, ला, ली, लू, ले, लो, अ, आ ) इच्छा शक्तिको कमीले तपाईंलाई भावनात्मक र मनोवृत्तिको सिकार बनाउन सक्छ।	आर्थिक सुधार निश्चित छ।	दिनको पछिल्लो भागको अनपेक्षित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारको लागि आनन्द र खुशी ल्याउँछ।	रोमान्टिक अमूर्तताले तपाईंको आनन्दमा मसला थप्नेछ।	नयाँ उद्यमले लोभ्याउँछन् र राम्रो लाभको प्रतिज्ञा गर्नेछन्।	महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्।	आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंको यो जीवनको सबैभन्दा राम्रो पूर्वसन्ध्या हुन सक्छ।
वृष ( ई, उ, ए, ऐ, ओ, व, वा, वो, वे, वौ, वं ) काममा र घरमा केही दबाव पर्नाले तपाईंलाई छिट्टै रिसाउने बनाउँछ।	तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्।	तनाउको समय हुन सक्छ तर परिवारको समर्थनले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ।	कसैको लागि बिहेको बाजा र कसैले आफुलाई ठूलो सोखमा राख्ने रोमान्स पाउनुहुनेछ।	बाँकी रहेका परियोजना र योजनाहरू अन्तिम आकार लिन उत्प्रेरित हुनेछन्।	आज तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।	तपाईंको जोडी यति सुन्दर कहिल्यै थिएन। तपाईंलाई आफ्नो जीवनको प्रेमबाट राम्रो आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
मिथुन ( क, का, की, कू, के, को, कौ, छ, ह, हा, छा ) व्यस्त कामको सयमले तपाईंलाई रिसाहा बनाउन सक्छ।	केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्।	आफ्नो ठूलो पार्टी सबैलाई लिनुहोस् - आज तपाईंसँग आफ्नो समूहको लागि कार्यक्रम संगठित गर्ने ऊर्जाको अतिरिक्त मात्रा हुनेछ।	रोमान्स रोमाञ्चक हुनेछ - त्यसैले तपाईंलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र दिनलाई उत्तम बनाउनुहोस्।	तपाईंले सीधा जवाफ दिनुभएन भने तपाईंका साथीहरू नाराज हुने सम्भावना छ।	पर्यटन र यात्राले खुशी ल्याउनेछ र अत्यधिक ज्ञानवर्धक हुनेछ।	तपाईंको जोडी आफ्नो जीवनमा तपाईंको मूल्य वर्णन गर्दै केही सुन्दर शब्दहरू लिएर आउनेछन्।
कर्कट ( हि, हू, हे, हो, डा, डी, डू, ड़, डे, डो ) मित्रबाट गरिएको एउटा विशेष प्रशंसा तपाईंका आनन्दको स्रोत हुनेछ। यसको कारण के हो भने तपाईंले ती जीवनजस्ता रूखहरू खडा गर्नुभएको छ जसले अरूलाई छाया दिन आफु खडा भएर प्रचण्ड गर्मी सहन गर्दछन्।	लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ।	परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। तपाईंले उनीहरूलाई ध्यान दिनुहुँदैछ भन्ने महसुस गराउन उनीहरूको आनन्द र दुःखमा आफैलाई संलग्न गराउनुहोस्।	आज, तपाईं र तपाईंको प्रेमी प्रेमको सागरमा तल्लीन हुनुहुनेछ, र प्रेमको उँचो अनुभव गर्नुहुनेछ।	आफ्नो रिजुम पठाउन वा साक्षात्कारको लागि राम्रो दिन।	यात्रा गर्ने मौका खोज्नु पर्नेछ।	तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध त्याग गर्नु झैं लाग्ने धेरै झगडाहरू हुनेछन्। तर, त्यति सजिलै सम्बन्ध त्याग नगर्नुहोस्।
शिंह ( म, मा, मी, मू, मे, मो, मौ, मं, ट, टा, टी़, टू, टो ) आराम गर्नको लागि घनिष्ठ मित्रहरूसँग केहि समय बिताउनुहोस्।	अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्।	आफ्नो घरको वरिपरि केही सफाईको तुरुन्तै आवश्यकता छ।	आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो।	आफ्नो दृष्टिकोणमा इमानदार र सही हुनुहोस् - तपाईंको सङ्कल्प र कौशलले परिचय प्राप्त गर्नेछ।	आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ।	अनपेक्षित अतिथिको कारणले तपाईंको योजनामा बाधा पर्ने सक्छ, तर यसले तपाईंको दिन राम्रो हुनेछ।
कन्या ( पा, प, पु, पं, प, पे, पो, पौ, टो ) आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ।	संयुक्त उद्यम र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरुमा लगानी नगर्नुहोस्।	व्यक्तिगत र गोप्य जानकारी प्रकट नगर्नुहोस्।	तपाईंले आफ्नो प्रियलाई उनको पछिल्लो भावशून्यताका लागि क्षमा गरेर आफ्नो जीवन लायक बनाउनु हुनेछ।	आफ्नो कौशल देखाउन अवसर आज तपाईंसँग हुनेछ।	तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ।	आजको दिन "पागल हुने" दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
तुला ( र, रा, री, रु, रे, रो, रं, ता, त, तू, ते, तो, ती ) आफ्नो परिवारसँग समय बिताएर अलग भएको र एक्लोपनको भावनाबाट छुटकारा प्राप्त गर्नुहोस्।	तपाईंले केही अतिरिक्त पैसा बनाउने तरिकाहरू खोजिरहनु भएको छ भने सुरक्षित वित्तीय योजनाहरुमा लगानी गर्नुहोस्।	तपाईंले तिनीहरूलाई खुसी पार्न जति गरेपनि - तपाईंसँग बस्ने मानिसहरू तपाईंसँग धेरै खुसी रहने छैनन्।	विवाहको प्रस्ताव हुनाले तपाईंको प्रेमी जीवन जीवनको लामो बन्धनमा परिणत हुन सक्छ।	नयाँ प्रस्तावहरू लोभ्याउने हुनेछन् तर यसका लागि कुनै पनि हतार निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुने छैन।	आज तपाईंलाई धेरै रोचक निमन्त्रणाहरू आउनेछन् - साथै एउटा आश्चर्यजनक उपहार पनि पाउन सक्नुहुनेछ।	आजको दिन "पागल हुने" दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
वृश्चिक ( न, ना, नी, नु, ने, नो, नै, नं, या, यी, यू, य ) धेर खाने र उच्च क्यालोरी भएको आहार नगर्नु उचित हुन्छ।	अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ।	परिवारको तनाउले तपाईंको ध्यान नबाँटोस्। नराम्रो समयले हामीलाई धेरै ज्ञान दिन्छ। आत्मग्लानिमा संलग्न भएर समय बर्बाद नगर्नुहोस् तर जीवनबाट केही सिक्ने प्रयास गर्नुहोस्।	तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्।	तपाईंले भर्खरै विकास गरेको व्यावसायिक संपर्कबाट पछि गएर लाभ हुनेछ।	आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्।	व्यक्तिगत दूरी वैवाहिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आज तपाईंहरू एक-अर्कामा नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। रोमान्स चरममा छ!
धनु ( ये, यो, ध, धा, धी, धू, धे, फ, भा, भी, भू, भे ) तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ।	एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ।	आफ्नो परिवारका साथ गरेको सामाजिक गतिविधिले सबैलाई तनाउमुक्त र सुखद मुडमा राख्ने थियो।	तपाईंले प्रेम सम्बन्धमा गलत बुझ्ने सम्भावना छ।	तपाईं प्रमुख जमीनको सम्झौता राख्ने र मनोरञ्जन परियोजनामा धेरै मान्छे समन्वय गर्ने स्थितिमा हुनुहुनेछ।	आज तनाउले भरिएको दिन हुनेछ, नजिकका कर्मचारीहरूसँग धेरै मतभेद आई पर्न सक्छ।	आज तपाईंका कुनै पनि योजना बनाउनु अघि आफ्नो जोडीलाई सोध्नुभएन भने, तपाईंलाई प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सक्छ।
मकर ( भो, ज, जा, जी, जे, जो, जै, जं, ख, खी, खू, खो, ग, गा,गी ) अगाडि राम्रो समय आउँदैछ भनेर खुशी हुनुहोस् र तपाईंलाई अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हुनेछ।	सफलताको लागि आजको सूत्र नवीन विचारधारा र राम्रो अनुभव भएका मानिसहरूको सल्लाहमा आफ्नो पैसा राख्नु हो।	आफ्नो सामाजिक जीवनलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। आफ्नो व्यस्त तालिकाबाट केही समय निकाल्नुहोस् र आफ्नो परिवारसँग पार्टीमा जानुहोस्। यसले तपाईंको दबाब मात्रलाई राहत दिंदैन, हिचकिचाहट पनि हटाउँछ।	तपाईं आज मितिमा जाने हो भने, विवादास्पद मुद्दाहरू नउठाउनुहोस्।	सेवकहरू - सहकर्मी र सह-कामदारहरूको समस्यालाई छोड्नु सकिंदैन।	आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ।	आफ्नो इच्छा अनुसार आज केही काम नहुन सक्छ, तर तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग सुन्दर समय बिताउनु हुनेछ।
कुंभ ( गु, गे, गो, स, सा, सी, सु, से, सं, सो, सौ, द, दा ) आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ।	तपाईं आफ्नो दिनको लागि बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै खर्च गर्ने झुकावमा विचार गर्नुहोस्।	तपाईंका साथीहरूलाई आफ्नो उदार स्वभावको फाइदा नदिनुहोस्।	तपाईंका जोडीको मूड धेरै राम्रो नभए झैं लाग्दैछ, यसैले कुराहरू सही तरीकाले संचालन गर्नुहोस्।	काममा र घरमा हुने दबावले तपाईंलाई रिसाहा बनाउन सक्छ।	तपाईंलाई आफ्नो जीवनमा रोचक कुरा होस भनेर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने - तपाईंले केही राहत पाउने पक्का छ।	आफन्तहरूले आज तपाईंको जोडीसित तर्क गर्न सक्छन्।
मीन ( दि, दू, झं, थ, था, दे, दो, च, चा, ची ) राम्रो जीवनको लागि आफ्नो स्वास्थ्य र समग्र व्यक्तित्वमा सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।	आज तपाईंले सजिलै धन बढाउन सक्नुहुन्छ - उल्लेखनीय ऋण सङ्कलन गर्नुहुन्छ - वा नयाँ परियोजनाहरूमा काम गर्नको लागि धनको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।	आफ्नो जीवन साथीको लापरवाहीले सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। आफ्नो बहुमूल्य समय खर्च गर्नुहोस् र आफ्ना खुसीका सुनौला दिनहरू पुनः प्राप्त गर्न आफ्ना रमाइला सम्झनाहरु याद गर्नुहोस्।	तपाईंले आज आफ्नी सपनाकी राजकुमारी भेटेकोले तपाईंका आँखा आनन्दले प्रकाशित भए र मुटुको धडकन पनि छिटो भयो।	तपाईंको सहयोगी मनोवृत्ति र विश्लेषणात्मक कौशललाई याद गरिनेछ।	दान र सामाजिक कार्यले आज तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछ - तपाईंले महान कार्यको लागि आफ्नो समय दिनुभयो भने तपाईंले धेरै परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।	तपाईंलाई आजको दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन अनुभव हुनेछ।
खिर खाने दिन १५ श्रावन, १३ दिन
मित्रता दिवस १९ श्रावन, १७ दिन
नाग पञ्चमी २० श्रावन, १८ दिन
रक्षा बन्धन ३० श्रावन, २८ दिन
जनै पूर्णिमा ३० श्रावन, २८ दिन
गाईजात्रा ३१ श्रावन, २९ दिन
श्री कृष्ण जन्माष्ठमी ६ भाद्र, १ महिना ६ दिन
बुवाको मुख हेर्ने दिन १३ भाद्र, १ महिना १३ दिन
कुशे औंसी १३ भाद्र, १ महिना १३ दिन
हरितालीका तीज १६ भाद्र, १ महिना १६ दिन
गणेश चतुर्थी १६ भाद्र, १ महिना १६ दिन
ऋषि पञ्चमी १७ भाद्र, १ महिना १७ दिन
ईन्द्रजात्रा २७ भाद्र, १ महिना २७ दिन
संविधान दिवस ३ असोज, २ महिना ४ दिन
जितिया पर्व ५ असोज, २ महिना ६ दिन
घटस्थापना १२ असोज, २ महिना १३ दिन
बिजया दशमी २१ असोज, २ महिना २२ दिन
कोजाग्रत पूर्णिमा २६ असोज, २ महिना २७ दिन
करवा चौथ ३० असोज, ३ महिना १ दिन
धन तेरस ८ कार्तिक, ३ महिना ९ दिन
काग तिहार ९ कार्तिक, ३ महिना १० दिन
लक्ष्मी पूजा १० कार्तिक, ३ महिना ११ दिन
कुकुर तिहार १० कार्तिक, ३ महिना ११ दिन
म्ह: पूजा ११ कार्तिक, ३ महिना १२ दिन
भाई टिका १२ कार्तिक, ३ महिना १३ दिन
छट पूजा १६ कार्तिक, ३ महिना १७ दिन
फाल्गुनन्द जयन्ती २५ कार्तिक, ३ महिना २६ दिन
गुरु नानक जयन्ती २६ कार्तिक, ३ महिना २७ दिन
बाला चतुर्दशी ९ मंसिर, ४ महिना १० दिन
विवाह पञ्चमी १५ मंसिर, ४ महिना १६ दिन
उधौली पर्व २६ मंसिर, ४ महिना २७ दिन
योमरी पुन्हि २६ मंसिर, ४ महिना २७ दिन
तोल् ल्होसार ११ पौष, ५ महिना १२ दिन
तमु ल्होसार १५ पौष, ५ महिना १६ दिन
नयाँ वर्ष (एडी) १६ पौष, ५ महिना १७ दिन
श्री स्वस्थानी पूर्णिमा २५ पौष, ५ महिना २६ दिन
तिलको लड्डु खाने दिन १ माघ, ६ महिना १ दिन
सोनम् ल्होसार ११ माघ, ६ महिना ११ दिन
सरस्वती पूजा १६ माघ, ६ महिना १६ दिन
भ्यालेन्टाइन डे २ फागुन, ७ महिना १ दिन
प्रजातन्त्र दिवस ७ फागुन, ७ महिना ६ दिन
महा शिवरात्रि ९ फागुन, ७ महिना ८ दिन
ग्याल्बो ल्होसार १२ फागुन, ७ महिना ११ दिन
नारी दिवस २५ फागुन, ७ महिना २४ दिन
होली २६ फागुन, ७ महिना २५ दिन
घोडेजात्रा ११ चैत्र, ८ महिना १० दिन
एप्रिल फूल डे १९ चैत्र, ८ महिना १८ दिन
राम नवमी २० चैत्र, ८ महिना १९ दिन
महावीर जयन्ती २४ चैत्र, ८ महिना २३ दिन
नयाँ वर्ष १ बैशाख, ९ महिना ० दिन
आमाको मुख हेर्ने दिन ११ बैशाख, ९ महिना १० दिन
लोकतन्त्र दिवस ११ बैशाख, ९ महिना १० दिन
अक्षय तृतीया १४ बैशाख, ९ महिना १३ दिन
उभौली पर्व २५ बैशाख, ९ महिना २४ दिन
बुद्ध पूर्णिमा २५ बैशाख, ९ महिना २४ दिन
गणतन्त्र दिवस १५ जेष्ठ, १० महिना १५ दिन
दहिचिउरा खाने दिन १५ आषाढ, ११ महिना १७ दिन
गुरु पूर्णिमा २१ आषाढ, ११ महिना २३ दिन